Soo celinta Xeebaha, Ellicott Dredges In Action
Grand Popo, Benin: Wasaaradda Deegaanka Deegaanka iyo Horumarinta Joogtada ah ayaa goor dhaweyd qandaraas siisay, oo ay maalgalisay Bangiga Aduunka, qandaraaslayaasha kaydka ee Galbeedka Afrika ee Saadka iyo Caawinta SA si ay uga saarto 100,000 oo meykroodyo ah oo wasakh ah Wabiga Mono ee Grand Popo, Benin. Bangiga Adduunku wuxuu ansixiyay $ 210 milyan oo lagu maalgalinayo in lagu maalgaliyo mashruuc heer gobol oo loo yaqaan 'Resilience Investment Programme (WACA)' Resilience Investment Program. Barnaamijka waxaa loogu talagalay in laga ilaaliyo nabaad-guurka xeebaha iyada oo loo marayo hawlo kala duwan, oo ay ku jiraan dib u soo celinta dhul daaqsimeedka, dib u buuxinta xeebaha, iyo dhismaha badaha. Grand Popo, oo loo yaqaan bulshada kalluumeysiga caan ah, ...
Dekadda Siuslaw ayaa Diyaar u ah Ellicott 360SL Swinging Drag Dredge ilaa Dredge Marina
Janaayo 16, 2020 - Shaqaalaha matalaya Dekedda Caalamiga ee Oregon ee Coos Bay waxay sugayaan ogolaansho ay ku bilaabaan qodidda marinka Siuslaw. Marinada Siuslaw, oo ay maamusho dekedda Siuslaw, waxay ka kooban tahay dhowr tan oo faaruqin ah, dhoobo, iyo dhoobo ah oo la soo uruuriyay in ka badan toban sano, taasoo ka dhigaysa mid caqabad ku ah maraakiibta inay maraan masaafo shan-mayl ah oo isku xidha Wabiga Siuslaw iyo Badweynta Baasifigga Dekedda Siuslaw waa degmo gaar ah oo si gaar ah loo xardhay oo si weyn ugu tiirsan meelaha dalxiiska, sida isboortiga iyo marinnada ganacsiga, soo saarida doonida, jardiinooyinka warshadaha, iyo xero horumarineed ee RV ....
Edgartown waxay adeegsaneysaa Ellicott 370 Dragon® Dredge si loogu Kordhiyo Ciid Mashruuca Nafaqeynta Xeebta ee Xeebta
Gudiga edbin ee Edgartown wuxuu ogolaaday in meesha laga saaro 20,927 yd³ (16,000 m³) ciid ah balliga Sengekontacket ee u dhow Vineyard Vicyard isagoo adeegsanaya taxanaha Ellicott® 370 Dragon® Dredge. Guddiga ayaa ogolaaday inay ka iibiyaan agabyada qashinka ee magaalada deriska la ah ee Oak Bluffs, oo ciidda u adeegsan doona qayb ka ah mashruuca nafaqada xeebta si ay u buuxiyaan xeebaha khafiifka ah ee bulshada maxalliga ah. Edgartown waa magaalada kaliya ee jasiirad ee ku taalo gobolka ee leh qulqul. Dhawrkii sano ee la soo dhaafay, guddiga qodista ayaa u adeegsaday 'Ellicott dredge' si ay heshiis ula galaan jasiiradda kale ee dariska ah ...
Ellicott Series 1270 Dragon® Dredge waxaa loo isticmaalaa in looga saaro silsiladaha iyo Sedimentka kaydinta Haamaha Kaydka Hawada.
Sanadka 2018 Xisaabta Millennium Challenge Account ee Malawi (MCA-M) ayaa la siiyay Ellicott Dredges qandaraas qandaraas ah oo lagu bixinayo Ellicott Series 1270 Dragon® dredge oo loogu talagalay warshadda quwada biyaha Kapichira ee Malawi. Hay'adda loo yaqaan Millennium Challenge Corporation (MCC), oo ah hay'ad dowladeed oo fadhigeedu yahay Mareykanka, ayaa si toos ah ula shaqeyneysa mas'uuliyiinta dowladda ee Malawi sannadihii ugu dambeeyay si ay u aasaaso aasaas adag kaasoo nidaamka awoodda waddanku uu si guul leh ugu sii jiri karo waqtigiisa. Inta badan dadka deggan Malawi waxay ku tiirsan yihiin quwadda biyaha sida isha koowaad ee tamarkooda. Sanadihii la soo dhaafay, dhismooyinka iyo sagxadda ayaa kor u kacday wabiga Shire ee u dhow Kapichira ...
Jidgooyooyinka Cutterhead Waxay Bilaabeen Mashruuca Qodista Dekedda Altamira - Ceel-biyoodka Ellicott
Dhismaha dekedda Altamira ee gobolka Tamaulipas, Mexico, waa mid ka mid ah afarta dekedood ee ugu waaweyn Mexico. Altamira waa qayb ka mid ah warshadaha waaweyn ee isku xira saadka ee alaabada sida LNG, petrochemicals, qaybaha warshadaha, iyo badeecooyinka. Waqtigan xaadirka ah, laba ceel oo Ellicott ah ayaa shaqeynaya ama bilaabaya mashruuc dekedda laga qodayo ee Altamira. Taxanaha Ellicott 670 Dragon® ayaa hadda loo isticmaalaa in lagu sameeyo dayactirka joogtada ah ee marinka iyo marinka marinka marinka warshadaha gaarka loo leeyahay. Xaqiiqdii, qod-jeex jeexjeexa dhexdhexaadku wuxuu ka kooban yahay "14" x14 "bambo wadarta wadar ahaan lagu rakibay 800 HP ...
Ellicott Dredges wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah in ka badan 90 bandhig oo ka qayb galaya 2019 Western Dredging Association (WEDA) Summit Summit iyo Expo laga bilaabo Juun 4 -7th ee Chicago Hilton Hotel ee Chicago, Illinois. Wakiilo ka socda wax soo saarka qodista, badda, iyo bulshada deegaanka oo ay weheliyaan xirfadlayaal kale oo dhinaca warshadaha ah, ayaa ka soo qayb geli doona dhacdada sanadkan.
Ma isku deyeysaa inaad go’aamiso haddii qodista mashiinka ama qulqulka biyuhu uu ku habboon yahay inuu buuxiyo shuruudahaaga macdanta? U doodayaasha qaar ayaa ku doodi kara in biyo qodista makaanikada ahi ay tahay mid sahlan oo aan ka yarayn dhibaatooyinka shaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, qulqulaha dareerayaasha ayaa qaali ah, waxay bixisaa dabacsanaan kordheysa, waxayna aad ugu habboon tahay jawiga adag ee ay qodistayaashu xaddidan yihiin. Intaas waxaa sii dheer, qulqulaha dareeraha ayaa ugu wanaagsan bay'ada markii la helayo alaabo dhadhan leh ayaa loo baahan yahay. Waxaa jira wax kabadan hal dariiqo oo lagu qodbo. Ugu dambeyntiina, go'aankaaga ayaa sida muuqata ku dhici doona illaa inta ay ku kici doonto iyo inta ay qaadanayso in la dhammaystiro ...
2019 Tradewinds Indo Pacific Forum & Howlgal
Ellicott Dredges Maamulaha Iibka Caalamiga ah, Phil Grove, wuxuu dhowaan ka qaybgalay Adeegga Ganacsiga ee Mareykanka ee "2019 Tradewinds Indo-Pacific Forum & Trade Mission" illaa New Delhi, India iyo Dhaka, Bangladesh. Toddobaadkii oo dhan wuxuu ka bartay fursadaha ganacsi ee ka jira gobolka Indo-Pacific wuxuuna awood u yeeshay inuu kooxda kala hadlo khibraddiisii ​​hore ee ganacsiga Bangladesh. Barnaamijka Adeegyada Ganacsiga ee Mareykanka ee 2019 ee loo yaqaan 'Winds Service Trade Winds', oo ah kulan Indo-Pacific ah oo diiradda lagu saaray ganacsiga, wuxuu ka koobnaa kulammo shirar gaar ah oo heer gobol iyo warshadeed ah iyo sidoo kale la-tashiyo horay loo sii diyaariyey oo lala yeeshay Diblomaasiyiin Mareykan ah oo matalaya suuqyada ganacsiga ee gobolka oo dhan. In ka badan 130 wufuud Mareykan ah oo ka kala socda 32 gobol ayaa daarnaa ...
Doodda mashiinka Dredge waxaa loo adeegsaday in lagu kala diro Marina oo u dhaw Puerto Vallarta, Mexico
Sanadkii 2017 Ellicott Dredges, oo ah soo saaraha Baltimore, Maryland (USA) ayaa gaarsiiyay Macaamiisha taxanaha 460SL Swinging Dragon® dredge macaamiisha u dhow Puerto Vallarta, Mexico. Qulqulka culus-culus waxaa hada loo isticmaalaa in looga saaro wasakhda marinada maxalliga ah iyo kanaalka maraakiibta ee sida tooska ugu xira Badweynta Baasifigga. Macaamiilku wuxuu xushay 460SL Swinging Dragon® dredge sababta oo ah awooda yar ee kartida ay ugu shaqeyso iyo cidhiidhi iyo meelo xadidan. Meelaha ay ka mid yihiin doonnida doomaha oo ay ilaashadaan dariiqa moolka lagama maarmaanka u ah maraakiibta waa weyn sida maraakiibta khaaska ah si ay si badbaado leh ugu safraan dib iyo gadaal iyagoo aan wax ku dhufan Tani ...
Weligaa Bal qiyaas Maxaanay u Dhiseysaa Inaad Dhisaan?
Tan iyo markii la aasaasay shirkadaha, Ellicott Dredges waxay heshay dhowr fursadood oo gaar ah oo lagu dhisi karo ceelal loo habeeyay macaamiisheenna kuwaas oo loo tixgeliyo wax ka baxsan baaxadda dhaqameed dhaqameed. Fiidiyowgii ugu dambeeyay ee shirkadeena, "Kooxda Ellicott ee Mashaariicda Waaweyn," wuxuu iftiiminayaa Ellicott sida ay uga go'an tahay inay dhisto meel la hubo oo culus. Intaas waxaa sii dheer, daawadayaashu waxay fursad u heli doonaan inay ku arkaan kooxdeena ficil ahaan iyagoo wada shaqeynaya si ay u soo saaraan qashin ka sareeya macaamiishayada. Iibsashada qoditaanka ayaa culeys ku noqon kara dadka qaar. Shirkad ahaan, waxaan ku faannaa sharaf weyn inaan ka caawinno macaamiisheenna inay helaan qoditaanka saxda ah. Kooxdayadu waxay si toos ah ula shaqeeyaan macmiilka si ay uga caawiyaan ...